လုပ်ကွက်အတွင်းမှ သိန်းပေါင်း သောင်းချီတန်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ …. •
လုပ်ကွက်အတွင်းမှ သိန်းပေါင်း သောင်းချီတန်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ ….
15/05/2019 Yan Naing News 0
ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စု မမုံကျေးရွာရဲ့ ကပ်လျက် အဲဗားဝင်းနားအုပ်စု ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး ကုမ္မဏီ လုပ်ကွက်အတွင်း က တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတတုံးကြီးကို ရေမဆေးရှာဖွေသူတွေက မေလ ၈ ရက်နေ့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို လုပ်ကွက်အတွင်း အချိန်ပိုင်းရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေခွင့် ပြုတဲ့ အချိန်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကီလို ငါးရာကျော် အလေးချိန်ရှိတယ် လို့ အဆိုပါကျောက်ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ဝင်ရောက်ထမ်းကူခဲ့တဲ့ ဂျော်ကီရေမဆေးသမားတဦးက ပြောပါတယ် ။
“ ကျောက်ကို လုပ်ကွက် လုံခြုံရေး ရဲတွေကို ငါးတစ်ပေးမယ် ( အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးရောင်းချရလျှင် ရောင်းရငွေရဲ့ ငါးပုံ တပုံ ပေးရ) ဆိုပြီး ညှိသယ်ခဲ့ရတာ ။ ကျောက်အပြင်ရောက်တော့ ရဲတွေရဲ့ ငါးတစ်စုကို သိန်း ၇၀၀ ဈေးဖြတ်ပေးနေပြီ ။ ရဲတွေက သူတို့အစု သိန်း ၇၀၀ အစု ကို အကုန်လုံး မယူပဲ သိန်း သုံးရာ့ငါးဆယ်ပဲ ယူပြီး ကျန်တဝက်ကို အစုဆက်လိုက်လာတာ ။ အခုအဲဒီကျန်တဲ့ သိန်းရာ့ငါးဆယ်စုကို သိန်း ၇၀၀၀ တောင်ပေးနေပြီ ” လို့ ၎င်းက ဆက်ပြောပါတယ် ။
အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးကြီးမှာ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ရန် လုပ်ကွက်လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ ဗျူးဟာမှူးကို အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး ။ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသမှာ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူများနဲ့ လုပ်ကွက်လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ ပတ်သက်မှုတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မြင်ကြားသိနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ခေါင်းပေါင်းကျင်းမြေစာ ကမ်းပါး ပြိုကျခဲ့တဲ့ နေရာက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါတယ် ။ အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ တာဝန်လုံးလုံးရှိတယ်လို့လည်း အဆိုပါ ကုမ္မဏီ ဝန်ထမ်းကပဲ ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
လုပ်ကွက်အတွင်း အချိန်ပိုင်းရေမဆေး ဝင်ရောက်ရှာဖွေခွင့်ကို တရားဥပဒေအရ ခွင့်မပြုထားသော်လည်း နယ်မြေဒေသအခြေအနေအရ နားလည်မှုဖြင့် ခွင့်ပြုထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီလို ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရေမဆေးသမားတွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သိန်းပေါင်း သောင်းချီတန်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးပေါင်းများစွာကိုလည်း ရေမဆေးသမားမျာရဲ့ ဖော်ထုတ်မှုကြောင့် တွေ့မြင်ကြားသိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
လုပျကှကျအတှငျးမှ သိနျးပေါငျး သောငျးခြီတနျတဲ့ ကြောကျစိမျးတုံးကွီးကို ရမေဆေးသမားမြား ရရှိ ….
ဖားကနျ့မွို့နယျ ဆိပျမူအုပျစု မမုံကြေးရှာရဲ့ ကပျလကျြ အဲဗားဝငျးနားအုပျစု ကြောကျစိမျးတူးဖျောရေး ကုမ်မဏီ လုပျကှကျအတှငျး က တနျဘိုးမွငျ့ ကြောကျစိမျးတတုံးကွီးကို ရမေဆေးရှာဖှသေူတှကေ မလေ ၈ ရကျနကေ့ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ ။
ကြောကျစိမျးတုံးကွီးကို လုပျကှကျအတှငျး အခြိနျပိုငျးရမေဆေးကြောကျရှာဖှခှေငျ့ ပွုတဲ့ အခြိနျမှာ တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ကီလို ငါးရာကြျော အလေးခြိနျရှိတယျ လို့ အဆိုပါကြောကျကြောကျစိမျးတုံးကွီး ဝငျရောကျထမျးကူခဲ့တဲ့ ဂြျောကီရမေဆေးသမားတဦးက ပွောပါတယျ ။
“ ကြောကျကို လုပျကှကျ လုံခွုံရေး ရဲတှကေို ငါးတဈပေးမယျ ( အဆိုပါကြောကျစိမျးတုံးရောငျးခရြလြှငျ ရောငျးရငှရေဲ့ ငါးပုံ တပုံ ပေးရ) ဆိုပွီး ညှိသယျခဲ့ရတာ ။ ကြောကျအပွငျရောကျတော့ ရဲတှရေဲ့ ငါးတဈစုကို သိနျး ၇၀၀ ဈေးဖွတျပေးနပွေီ ။ ရဲတှကေ သူတို့အစု သိနျး ၇၀၀ အစု ကို အကုနျလုံး မယူပဲ သိနျး သုံးရာ့ငါးဆယျပဲ ယူပွီး ကနျြတဝကျကို အစုဆကျလိုကျလာတာ ။ အခုအဲဒီကနျြတဲ့ သိနျးရာ့ငါးဆယျစုကို သိနျး ၇၀၀၀ တောငျပေးနပွေီ ” လို့ ၎င်းငျးက ဆကျပွောပါတယျ ။
အဆိုပါကြောကျစိမျးတုံးကွီးမှာ လုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ ပါဝငျပတျသကျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အတညျပွုခကျြ ရယူနိုငျရနျ လုပျကှကျလုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့ ဗြူးဟာမှူးကို အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျခဲ့ပမေဲ့ ဆကျသှယျမရခဲ့ပါဘူး ။ ဖားကနျ့ကြောကျစိမျးတှငျးဒသေမှာ ရမေဆေးကြောကျရှာဖှသေူမြားနဲ့ လုပျကှကျလုံခွုံရေး ယူထားတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားရဲ့ ပတျသကျမှုတှဟော မကွာခဏဆိုသလို တှမွေ့ငျကွားသိနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
ကြောကျစိမျးတုံးကွီးဟာ နိုငျငံတျောရဲ့ ခေါငျးပေါငျးကငျြးမွစော ကမျးပါး ပွိုကခြဲ့တဲ့ နရောက တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပွီး နိုငျငံတျောပိုငျ ကြောကျစိမျးတုံးကွီး ဖွဈတယျလို့ ကုမ်မဏီဝနျထမျးတဦးက ပွောပါတယျ ။ အဆိုပါကြောကျစိမျးတုံးကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောငျ့ရနျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှာ တာဝနျလုံးလုံးရှိတယျလို့လညျး အဆိုပါ ကုမ်မဏီ ဝနျထမျးကပဲ ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
လုပျကှကျအတှငျး အခြိနျပိုငျးရမေဆေး ဝငျရောကျရှာဖှခှေငျ့ကို တရားဥပဒအေရ ခှငျ့မပွုထားသျောလညျး နယျမွဒေသေအခွအေနအေရ နားလညျမှုဖွငျ့ ခှငျ့ပွုထားရခွငျးဖွဈပါတယျ ။ အဲဒီလို ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့နောကျပိုငျးမှာ ရမေဆေးသမားတှေ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ သိနျးပေါငျး သောငျးခြီတနျတဲ့ ကြောကျစိမျးတုံးပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ရမေဆေးသမားမြာရဲ့ ဖျောထုတျမှုကွောငျ့ တှမွေ့ငျကွားသိခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ ။
အ ရူး တွေ ကောင်း စား သွား ရင် သူ များ နဲ့ မ တူ ဘူး အ သိ သာ ကြီး ပါ
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆား ထည့်လျှော်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်သွားတဲ့ တွက်ကိန်း
ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ
အချစ်ရေး ကံကောင်းစေမယ့် ယတြာ
Santhitsa provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://santhitsa.net/ (example – Local News,International News, Articles, Entertainment, Sport, Health, Funny, Cooking….etc). Hope our visitors enjoy our website.
သွားခေါင်းပေါက်နဲ့ သွားကြွေလွှာ ပျက်စီးမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း ၂ မျိုး
သင့်ချစ်သူရဲ့ ပါးစပ်က ဒီစကား (၅)ခွန်း ထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ